octobre 2018 - Page 3 sur 69 -
SADC : Nokianin’ny Fiarahamonim-pirenena mafy
30/10/2018 admintriatra 0
Nigadona teto Madagasikara ny delegasion’ny Sadc, ny faran’ny herinandro teto. Raha ny fampitam-baovao mantsy, hanara-maso ny fizotran’ny fifidianana eto amintsika izy ireo. Eny, fa na nampahafantarin’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana, na ny Ceni ireto …Tohiny
Kandidà Dama sy Beriziky : Tsy manohana an’i Andry Rajoelina
Niparitaka manerana ny tambajotran-tserasera tamin’ny alalan’ ny kaonty tsy ofisialy, fa manohana ny kandidà laharana fahatelo ambin’ny folo i Omer Beriziky sy Rasolofondraosolo Zafimahaleo, na i Dama. Hita tao amin’ ny kaonty hosok’i Omer Beriziky, …Tohiny
Firaisan’ny kandidà : Hanao hetsika eny Mahamasina anio
Tapitra ny fe-potoana 72 ora nomen’ny firaisan’ny kandidà ireo mpisehatra amin’ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fitondram-panjakana. Hanatanteraka hetsika goavana etsy Mahamasina androany noho izany ireo kandidà, ary hitatitra amin’ ny vahoaka ny zava- misy …Tohiny
Lozam-piarakodia teny amin’ny “Digue” : Mpitondra môtô maty
Nitrangana lozam-piarakodia indray teny amin’ny “digue”. Nandriaka nanerana ny arabe ny rà, vokatry ny fianjeran’ny mpitondra môtô nifanehitra tamin’ny taksibe teo anoloan’ny “arrêt bus” teny amin’ny Digue vao afaka kelin’Ambodihady. Io no vokatry ny fifandonana …Tohiny